आज २०७७ असोज १९ गते सोमबाट तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
काठमाडौं, असाेज ४, यातायात व्यवसायीले सबै सिटमा यात्रु राखेर यातायात संचालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले एयरलाइन्सलाई भौतिक दूरी कायम गरेर पूर्ण क्षमतामा जहाज उडाउन पाउने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्। जहाजमा पूरा सिटमा मान्छे राख्न दिएर सरकारले सार्वजिनक बसमा विभेदकारी नीति ल्याएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालको आरोप छ। […]
असोज, काठमाडौं । गन्तव्य मुलुकको संस्कृति तथा नियम कानून विपरित सार्वजनिक ठाउँमा भेला भएर उच्छिृंखल र असामाजिक गतिविधि नगर्न कतार स्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई आग्रह गरेको छ । दूतावासले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै विगत केहि सातायता कतारमा रहेका नेपाली समुदायका केहि व्यक्तिले त्यस्तो गरिरहेको पाइएको भन्दै यसमा सजग गराएको हो । कतारको प्रमुख आकर्षणको […]
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ मा अब दीपाश्रीको ठाउँमा करिश्मा, दीपाश्री निरौला किन बाहिरिन ?
कोरोना संक्रमित ट्रम्प कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? कसरी भैरहेको छ उपचार ?